बिज्ञान/प्रविधि – Page6– JanaSanchar.com
विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु कुनै पनि बैचारिक संगठनको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । तरयो कानुनी व्यवस्था विपरीत विभिन्न विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नेपाली कांग्रेस निकट प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघको आगामी फागुन २० देखि २१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नै बनेको खुलासा भएको छ । दृष्टि साप्ताहिकमा खबर..
सामसुङका कार्यवाहक प्रमुख कोरियामा पक्राउ, घुसखोरीको आरोप
सामसुङ कम्पनीका कार्यवाहक प्रमुख ली जाइ-यो दक्षिण कोरियामा पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि घुसखोरी लगायतका आरोपहरु छन् । यो मुद्दा एउटा स्क्यान्डलसँग जोडिएको छ जसको राष्ट्रपति पार्क गेउङ-हाइसम्म गासिएको छ । पार्कका एक मित्र चोइ सुन-सीलले चलाएको मुनाफारहित फाउन्डेसनलाई चन्दा दिएर सामसुङले सरकारको सदासयता प्राप्त गरेको आरोप लगाइएको छ । ली र..
लेखापालको फेसबुकमा १६ जिबी अश्लील डाटा
हरीले विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्दै अश्लील क्रियाकलापमा संलग्न एक व्यक्तिको फेसबुक एकाउन्टभित्र १६ जिबी अश्लील डाटा फेला पारेको छ। सामान्यतया साढे दुई घन्टा लामो चलचित्रको कम्प्युटर डाटा भार दुई जिबी भन्दा कम हुन्छ। प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिले अश्लील र छद्मनाममा खोलेको फेसबुक पेजमा आवाज, दृश्य र शब्दको ठूलो भण्डार जम्मा..
मोबाइल फोनको दुनियामा नयाँ युगको सुरुवात गरेको र कुनै समय नोकियाको निकै लोकप्रिय मोबाइल फोनको रुपमा रहेको नोकिया ३३१० पुनः बजारमा आउने भएको छ । टिकाउ, मजबुती र लामो ब्याट्री लाइफका लागि प्रसिद्धि कमाएको नोकिया ३३१० लाई नोकियाले रिलञ्च गर्ने भएको हो । त्यसअघिका मोबाइल फोन आकारमा निकै ठूला हुने गरेकोमा नोकियाले चिटिक्कको नोकिया ३३१०..
नेपाली विद्यार्थीले बनाए घामबाट चल्ने कार
काठमाडौं पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा ३ दिनदेखि जारी बिज्ञान प्रर्दशनी समापन भएको छ । सातौ राष्ट्रिय मेकानिकल प्रर्दशनीमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ पढ्दै गरेकाहरुले विभिन्न प्रविधिहरुको स्टल राखेका थिए । प्रविधि मेलाको सबैभन्दा आकर्षणको केन्द्र बनेको थियो सोलारबाट चल्ने कार । सोलार कार पश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ क्याम्पस पोखराका ८..
के घरमा बत्ति बाल्न विद्युत ग्रीडको सट्टा आलुको प्रयोग सम्भव छ? अनुसन्धानकर्ता राबिनोविच र उनका सहयोगी अघिल्ला केही वर्षदेखि यसैलाई प्रोत्साहित गर्दै छन। सस्तो धातुको पाता, तार र एलइडी बल्ब जोडेर यस्तो बत्ति बालिन्छ र विश्वका स-सना गाउँ यहि प्रविधिले उज्यालो बनाउने सक्ने उनी दाबी गर्छन्। बीबीसीमा छापिएको एक रिपोर्ट जेरुशेलमको..
ट्वीटरले ल्यायो लाइभ भिडियो ब्रोडकास्ट फिचर
माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्वीटरले नयाँ लाइभ भिडियो ब्रोडकास्ट फिचर ल्याएको छ । पेरिस्कोपमा आधारित उक्त फिचर एप्पल तथा एन्ड्रोइड दुबै स्मार्टफोनमा उपलब्ध रहेको र अब प्रयोगकर्ताले आफ्ना फलोअर्ससँग आफ्ना लाइभ भिडियो प्रत्यक्ष रुपमा शेयर गर्न सक्ने बताइएको छ । विश्वमा के ट्रेण्डिंग भैरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन ट्वीटर सबैभन्दा लोकपि्रय..
स्याम्पु र तेललाई चुनौती दिदै आयो चायाँ प्रतिरोधी काइँयो
कपालमा चायाँ आउन नदिने स्याम्पु, तेल आदिको बारेमा त सुन्नुभएकै छ । प्रयोग पनि गर्नुभएको छ होला । तर अब तपाइँले कपालमा चायाँ नियन्त्रण गर्नका लागि स्याम्पु तथा तेल लगाइरहनु आवश्यक छैन । अब एउटा विशेष काइँयोले कपाल कोरेमात्र पुग्नेछ । भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित ३६ औँ अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला अन्तरगत दिल्ली पभेलियनमा एक अद्धितीय..
वाइफाई ह्याक भयो कि ? के गर्ने ?
घरको इन्टरनेटमा वाइफाई सेवा जोड्नुभएको छ । पहिले स्पिडमा चलिरहेको वाइफाई स्लो भएको महसुस त भएको छैन ? यो अवस्थामा टाउको समाएर तनाव लिने होइन । गम्भीर भएर सोच्नुहोस् । वाइफाई स्लो हुनुको कारण चोरी पनि हुन सक्छ । यो समस्या अहिले अधिकांशले भोग्ने गरेका हुन्छन् । वाइफाई ह्याक गरेर कसैले मस्ती गरिरहँदा तपाईंले सास्ती भोग्नुपरेको हुन्छ ।..
हिन्दु अधिराज्यको माग गर्दै पाँच बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक
विश्व हिन्दु महासंघले नेपाललाई तत्काल हिन्दु अधिराज्य घोषणा गर्न माग गरेको छ । तीन दिने अन्तर्राष्ट्रिय विराट हिन्दु महासम्मेलनको तेस्रो तथा अन्तिम दिन शनिबार पाँच बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै यस्तो माग गरेको हो । महासंघका नवनिर्वाचित भरतकेसर सिंहले विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य नेपाललाई बलपूर्वक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा र..